तौल बढाउन नसकेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अब यसरी बढाउनुहोस् तौल - TV Annapurna
तौल बढाउन नसकेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अब यसरी बढाउनुहोस् तौल
November 11, 2017 Annapurna TV
हाम्रो उमेर तौल र उचाई अनुसार मोटाई हुनु आवश्यक छ ।
सबैको चिन्ता मोटोपन घटाउने मात्र छैन । कतिपयलाई तौल बढाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । वाध्यता पनि । भनिन्छ, तौल घटाउन जति गाह्रो छ, उत्ति नै सजिलो त, तौल बढाउन । तर, भुक्तभोगीहरु यसमा सहमत छैनन् । उनीहरु भनिरहेका हुन्छन्, ‘यसो गर्दा पनि तौल बढेन ।’
हाम्रो उचाई अनुसार तौलको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । जस्तो कि पाँच फिट पाँच इन्च अग्ला व्यक्तिको तौल ६० केजीसम्म सहि मानिन्छ । त्यो भन्दा अधिक कम वा धेरै तौल हुनु स्वभाविक होइन ।
नारायणगढ मुग्लीन सडक शनिबार बन्द